DHAGEYSI XASAASI AH: Xildhibaano katirsan Aqalka Sare oo goor dhaw ku dhawaaqay, war aan farxad galin RW Kheyre… – Shacabka News
DHAGEYSI XASAASI AH: Xildhibaano katirsan Aqalka Sare oo goor dhaw ku dhawaaqay, war aan farxad galin RW Kheyre…
Mudanayaal katirsan Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhaw ku dhawaaqay in ay sharciga marin doonin cid kasta oo lug ku yeelata dhacdadii lagu dhiibay Sarkaal sare oo katirsanaa Jamhadda ONLF oo ay qabteen Sirdoonka Soomaaliya.
Gudoomiyaha guddiga Difaaca & Amniga Qaranka ee Aqalka Sare Soomaaliya Jen, Axmed Xaashi Maxamuud oo la hadlayey wariyaasha ayaa sheegay in Soomaaliya ka gudubtay waqtigii isla xisaabtam la’aanta.
RIIX OO HALKAAN KA DHAGEYDO.
Mudanahan oo ay garbihiisa fadhiyeen mudanayaal katirsan labada Aqal ee dawladda Soomaaliya ayaa ku dhaartay in ay cadaaladda marin doonaan oo aysan marnaba ka hari doonin kooxaha ugu yeeray in laga soo waariday wadamada dibada.
Jeneraalka ayaa ka rogay in ay Soomaaliya midoobi doonto oo ay qaadan karto waqti, balse ay tahay mid dhameystiran oo ay Soomaali dib ugu imaan doonto sidii ay u midoobeen Jarmalka, Yemen iyo Kuuriyooyinka, taasna ay tahay mid sharci ah.
‘’ Haddaan baarlamaanka nahay arrinta Soomaaliya maahan sidda ay wiilasha yar yar ugu ciyaarayaan, wey ka guda weyn tahay, wax dusha saarto Wiil yar oo meelahaas ka yimid, Kumanaan ayaa u soo dhintay Halganka Soomaaliyeed” ayuu yiri xildhibaanka.
Itoobiya waxay ugu baaqeen in aysan ka faa’iideysan dafiicnimada iyo dawladda jilicsan ee Soomaaliya, balse ay waajib ku tahay in ay berri kafakarto ee aysan maanta danaheeda uun eegan.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 07/09/2017 Categories WARARKA MAANTA
Previous Previous post: DEG DEG+AKHRISO: Dawladda Puntland oo si adag uga hadashay xiisad taagney, uguna yeertay Qaran Dumis.
Next Next post: AKHRISO: Wasiiro Xilkooda Waayi Doona Kadib markay ka hor yimid Go’aankii Dowladda ee Arrinta Qalbi dhagax..